विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, कस्तो छान्ने जिवनसाथी ? - IAUA
ramkrishna December 19, 2016	कस्तो छान्ने जिवनसाथी ?विवाह गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ
जताततै विवाहको दृष्य देखिन्छ । धेरै युवायुवतीहरु जोडी बन्न लागेका छन् । कतै प्रेम विवाह हुँदैछ, कतै मागी विवाह हुन लाग्दैछ ।
हिजोआज हामी फेसबुकको पुस्तामा छौ । फेसबुकमा हेरेको, भेटेको आधारमा पनि विवाह भैरहेको हुन्छ । फेसबुककै आधारमा एकले अर्कालाई मन पराइरहँदा उनीहरूका अभिभावक एवं अग्रजहरूको आशीर्वाद छ कि छैन त्यो बिर्सिरहेका हुन्छन् ।
जीवनसाथी सुन्दरता, सर्टि्फिकेट एवं सम्पत्तिलाई भन्दा पनि उसको स्वभाव र संस्कारलाई हेरेर बनाउने हो भने जीवन सधै सुन्दर हुन्छ । सुन्दरता, सर्टि्फिकेट र सम्पत्ति हेरेर विवाह गरिए पनि स्वभाव र संस्कार आफूसँग मिलेन भने सुन्दरता, सर्टि्फिकेट र सम्पत्ति सबै अर्थहीन हुन्छन ्। त्यसैले जीवनसाथी रोज्दा धेरै कुरा विचार गरौं । मुख्य कुरा आफूसँग स्वभाव एवं विचार मिल्छ कि मिल्दैन ध्यान र्पुयाऔं। ताकि आफूले रोजेको जीवन साथीसँग जीवनभर प्रेम एवं विश्वासका साथ एक रथका दुई पाङ्ग्रा भएर हिँड्न सकियोस्।
Previous Previous post: अनावस्क रुपमा रिश उठेर हैरान हुनुन्छ??? रिस नियन्त्रण गर्न अपनाउनुहोस् यी ९ उपायहरु
Next Next post: युवा र युवतीको विवाह गर्ने उमेर कति ? जानी राखौं